“စိတ်မကောင်းပါဘူးယောက်ဖ …. မင်းတို့ပြေးပါတော့ “ လို့ဆိုပြီး ငိုပြီးပစ်ခဲ့ရတဲ့ ကျည်ဆန်တွေရှိတယ် – Myanmar Update News
News-Update | May 4, 2020 | Knowledge | No Comments
ငိုပြီးပစ်ခဲ့ရတဲ့ ကျည်ဆန်တွေရှိတယ် နေရာက သောင်ရင်းမြစ် အနောက်ခြမ်း။ အဝေးကို လှမ်းကြည့်ရင် စိမ်းပြာရောင် တောင်တန်းတွေက လှိုင်းတံပိုးတွေအလား ၀န်းရံလို့။ အနောက်ဘက်ဆီက သစ်မျောတွေက သောင်ရင်းရဲ့ရင်ကိုခွဲလို့တအိအိနဲ့ ဆင်းလာနေတယ်။
အပြာနုရောင်အမိုးအောက်မှာ တိမ်ဖြူတွေက ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက်။ တစ်ခါတစ်ခါ ရိုးမအတွင်းက ဂျီဟောက်သံက မကြားတကြား။ သောင်ရင်းမြစ်ရေက ငြိမ်တစ်ခါ ကြမ်းတစ်လှည့်နဲ့ သံလွင်ဆီကို စီးဆင်းနေလေရဲ့။ အရာရာဟာ အထီးကျန်ခြင်းရဲ့ပြယုဂ် တစ်ခုအလား
တစ်စပြင် ကဲ့သို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သတ်။ ဆက်သွယ်ရေးမြောင်းထဲက စစ်သားတစ်ယောက် ပွတ်ချွန်းလို့ခေါ်တဲ့ … (လက်ဘက်ခြောက်ကို အိမ်သာသုံးစက္ကုနဲ့လိပ်ထားတဲ့) ဆေးလိပ်ကို ပါးချိုင့်အောင်ဖွာနေတယ်။
သူ့အတွက် အထီးကျန်ခြင်းကို တီးမိခေါက်မိမရှိဘူး ပျင်းရိခြင်းကိုနားမလည်ဘူး။ တစ်ခါတစ်ခါ အလွမ်းကလွဲရင် ဘာမှမပိုင်တဲ့ သူ့အဖို့ အဝေးကအသံတစ်ချို့ကို နားစွင့်ရင်း ချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ထိုင်နေလေရဲ့။သြော် သူရောက်နေတဲ့နေရာက ” ရင်… ဆိုင်… ကုန်း” ရင်ဆိုင်ကုန်းဆိုတာကတော့
မိမိတပ်နဲ့ရန်သူ့တပ် နှစ်ခုဟာ မျက်နှာချင်းဆိုင် ကုန်းနှစ်ခုအပေါ်မှာစခန်းချထားတာပါ။ ကိုယ့်ဘက်က ကျည်ထိုးသံ သူ ကြား သူ့ဘက်က မောင်းတင်သံ ကိုယ် ကြား တဲ့နေရာပေါ့။ စစ်ရေးသတိ အပြည့်ရှိရတဲ့နေရာဖြစ်ပြီး တစ်ချက်မှားတာနဲ့ ဇိဝိန်ကြွေသွားနိုင်တယ်။
အားလုံးတိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက် ခေါင်းတောင်မဖော်ကြပဲ ကျင်းတွေမြောင်းတွေထဲမှာ အသံတိတ်နေရတာပါ။ ဘယ်လောက်ကြာအောင်နေရလဲဆိုတော့ နှစ်ချို့အောင်နေရပါတယ်။ အရာရာကို တိတ်ဆိတ်ခြင်းကလွှမ်းမိုးလို့ အဝေးကလှမ်းကြည့်ရင် စခန်းပျက်ကြီးတွေအလား ပေါ့ဗျာ။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ရင်ဆိုင်ကုန်းနှစ်ခုက တပ်သားတွေ နှစ်ချို့ခဲ့ကြတယ်။ စစ်သားလည်း လူသားပေမို့ထူးဆန်းစွာပဲ မမြင်ဘူးမတွေ့ဘူးတဲ့ ရန်သူတွေအချင်းချင်း သံယောဇဉ်က တစ်စတစ်စပေါ့။ “ဂေါင် ဂေါင် ဂေါင်” (ဟန်းကောကို ဒုတ်နှင့်ခေါက်သံ) “ဟိုဘက် ကယောက်ဖတွေရေ
ဘာချက်လဲဟေ့” ဆက်သွယ်ရေးမြောင်းထဲကပြန်ဖြေတယ်…. “၀က်သား”“ဟဟ မဖြိးနဲ့ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ဘက်က ငါးပိဖုတ်နံ့ဒီကတောင်ရတယ်။” “အောင်မာ မင်းတို့ဘက်က ငှက်ပျောအူ ပြုတ်နံ့ကရော မနက်ကတည်းကရနေတာ။”
“ဟင်းစားလဲမလား ” “လုပ်လိုက်လေ သေနတ်မယူကြေး ကုန်းနှစ်ခုကြားက ချောင်းခြောက်မှာ လဲမယ်။” ဒီလိုနဲ သူတို့တွေရင်းနှီးလာခဲ့ကြတယ်။ ဟင်းစားတွေ လဲ စားကြတယ်။ ကုန်းနှစ်ခုကြားက ချောင်းခြောက်က ခြင်းကွင်းဖြစ်နေပြီ။ ညနေဆို တပ်နှစ်ခုချိန်းပြီးခြင်းခတ်တယ်။
ကြေးကတော့မများပါဘူး ကုန်းပိုးစီးကြေး။ ငပိ တစ်ပိသာကြေး။ စသည်ဖြစ်ပေါ့။ စစ်ရေးသတိကတော့ နှစ်ဘက်လုံးရှိကြပါတယ်။ အစပိုင်းတော့ သေနတ်တွေ ဖွက်ယူလာခဲ့ကြတယ်။ နောက်တော့လည်း မယူကြတော့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့နှစ်ချို့လာခဲ့ကြတယ်။ တစ်နေ့ အမိန့်တစ်ခုကြောင့်။
သို့မဟုတ် အခြေနေတစ်ခုကြောင့် သူတို့တွေ တိုက်ခဲ့ ကြတယ်။ နိုင်တဲ့ဘက် နိုင်မယ် ရှုံးတဲ့ ဘက် ရှုံးမယ်။ စစ်မှာ အရှုံး အနိုင်မရှိ သေသူနဲ့ရှင်သူပဲ ရှိသည်လေ။ ကျတော် ကြားဘူးသလောက် တစ်ချို့က ငိုပြီး ပစ်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်။ “စိတ်မကောင်းပါဘူးယောက်ဖတို့ရာ
မင်းတို့ပြေးပါတော့ “လို့ နိုင်တဲ့ဘက်က အော် ပစ် တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေး ကျတော်တို့သိပ်လိုချင်တယ်ဗျာ။ အဲဒီလိုခံစားမှုမျိုးတွေက ခံရခက်လှတယ်။ ဒါတွေကို ငြိမ်းချမ်းရေးလို့တတွင်တွင် အော်ပြနေတဲ့ မျောက်ပြဆန်တောင်းတွေအဖို့ နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြုံဘူးမှာလဲမဟုတ်ကြဘူး။
အဲဒီ အဲဒီ စစ်မြေပြင်က နှစ်ဘက် စစ်သားတွေ အသိဆုံးနေလိမ့်မယ်။ ဘယ်စစ်သားမဆို စစ်မတိုက်ချင်ကြပါဘူး။ အဓိကတာဝန်က စစ်တိုက်ရန်ဆိုပေမယ့် ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်တပ်မှာကို တပ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း မိသားစုနဲ့နေချင်ကြသူချည်းပဲ။
ခင်ဗျားတို့က အကျီ င်္အပြာတွေဝတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက်ပြတယ်။ ကျုပ်တို့က အကျီ င်္ီအစ်ိမ်းတွေဝတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး အောက်မှာ အံကြိတ်ခဲ့ ရတယ်။ စစ်သားဟာ စစ်မတိုက်ချင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေ သွေးထွက်သံယိုတွေ
နာကျည်းမှုတွေ ငိုကျွေးမှုတွေ နာမည်မတပ်နိုင်တဲ့ ခံစားမှုမျိုးတွေကို စစ်သားပဲ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရတာ။ ကျွန်တော် အပေါ်မှာရေးတဲ့ အကြောင်းအရာလေးက ကိုယ်တွေ့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့် အဖေပြောပြတဲ့ သူတို့တုန်းက ဟိုး ကရင်ပြည်နယ်ဘက်က အကြောင်းလေးပါ။
အခုတော့ သူတို့တွေ ငြိမ်းချမ်းရေး ရကြပြီ။ အမိုးအိမ်မှာထမင်းစားရင် ဖထီးက M 16 နဲ့မပစ်တော့ဘူး။ သူတို့တွေရဲ့ဟိုးတုန်းက စခန်းကုန်းနှစ်ခုကြားက ပုန်းရှိုး ကွယ်ရှိုး ခတ်ခဲ့ကြတဲ့ ကုန်းပိုးစီးကြေး ခြင်းခတ်ပွဲဟာ အခုတော့ မြိုင်ကြီးငူဒေသမှာ ကျင်းပနေပြီ။
ယောက်ဖတွေ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် တူတူ ထိုင်နေကြပြီ။ ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်ကို တူတူ တက်ကြပြီ။ ငြိမ်းချမ်းရေး အဓွန့်ရှည်ပါစေ။ စစ်ဆိုတာကို နားလည်နိုင်ပါစေ။ ခရက်ဒစ် လေးစားစွာဖြင့် ခရစ်ဒစ် ပွကြီး